၂၄ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၁၈
ဒီတပတ် English American Style Idioms ကဏ္ဍမှာ မျက်မှောက်နိုင်ငံရေးလောကမှာ သုံးနှုန်းနေတဲ့ အီဒီယံအသုံးတချို့ဖြစ်တဲ့ Pick up the tab, All eyes on နဲ့ A hard sell တို့ကို တင်ပြထားပါတယ်။
(၁) Pick up the tab
Pick up (ကောက်ယူလိုက်တာ)၊ the tab က ဘန်းစကားဖြစ်ပြီး စားသောက်ဆိုင်တွေ၊ အရောင်းဆိုင်တွေကပေးတဲ့ ကျသင့်တဲ့ငွေ ပြေစာဖြတ်ပိုင်း (Receipt) ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် စကားတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က ငွေပြေစာဖြတ်ပိုင်းကို ကောက်ယူလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အီဒီယံသွယ်ဝိုက်အဓိပ္ပါယ်က ကျသင့်တဲ့ငွေကို တာဝန်ယူ ရှင်းပေးတာ၊ ကျသလောက်ကို ငွေထုတ်ပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးကို တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ Pyeongchang မှာ ကျင်းပနေတဲ့ ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်ပွဲတော်ကို မြောက်ကိုရီးယားဘက်က ခေါင်းဆောင် Kim Jong-un ရဲ့  ညီမအပါအဝင် ဖျော်ဖြေရေးအဖွဲ့သား (၁၃၇) ဦးနဲ့ အားကစားသမားများ စုစုပေါင်း လူ (၅၀၀) ကျော် လာရောက်တဲ့ ကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်တဲ့ ဒေါ်လာ (၂.၇) သန်းကို ကျခံဖို့ တောင်ကိုရီးယားက သဘောတူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်The Wall Street Journal သတင်းစာကြီးက North Korea leaves the South to pick up its Olympics tab၊ မြောက်ကိုရီးယားကသူ့ရဲ့ အိုလံပစ်ကုန်ကျစရိတ်ကိုတောင်ပိုင်းကို ကျခံစေမယ်လို့ ရေးသားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
John picked up the tab for his friend’s farewell party at the restaurant.
စားသောက်ဆိုင်မှာ သူ့သူငယ်ချင်း နှုတ်ဆက်ပွဲအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကို John က ကျခံလိုက်တယ်။
(၂) All eyes on
All (အားလုံး)၊ eyes (မျက်စိ)၊ on (အပေါ်) ဖြစ်ပြီး၊ စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က မျက်စိအားလုံးက တခုခုပေါ် ရောက်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အီဒီယံသွယ်ဝိုက်အဓိပ္ပါယ်ကလည်း သိပ်မကွာလှပါဘူး။ အများရဲ့  အာရုံစိုက်ခံရတာ၊ ဝိုင်းကြည့်ခံရတာ၊ စောင့်ကြည့်ခံရတာကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးကို မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခေါင်းဆောင် Kim Jong-un ရဲ့  နျူကလီးယား မျှော်မှန်းချက်တွေ၊ ဒုံးလက်နက် စမ်းသပ်မှုတွေ၊ သူ့ရဲ့  မကြာခဏ ခြိမ်းခြောက်မှုတွေကြောင့် အမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးက ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်မှာ မြောက်ကိုရီးယားကို မျက်စိဒေါက်ထောက်ကြည့်နေတယ်ဆိုပြီး Foreignpolicy.com မှာ All Eyes on North Korea လို့ရေးသားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
All eyes were on the Minister when he visited the refugee camps recently.
ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကို မကြာသေးမီက ၀န်ကြီးသွားရောက်လခဲ့စဉ်သွားရောက်ခဲ့စဉ်က လူတွေအားလုံးက သူအပေါ် ၀ိုင်းအာရုံစိုက်ခဲ့ကြတယ်။
(၃) A hard sell
A hard (ခက်ခဲတဲ့လုပ်ရပ်တခု)၊ sell (ရောင်းချမှု) ဖြစ်ပြီး စကားစုတစုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က ခက်ခဲတဲ့ရောင်းချမှုတခု ဖြစ်ပါတယ်။ သာမန်အားဖြင့် ရောင်းဖို့ခက်တယ်၊ ရောင်းလို့မထွက်ဘူးဆိုတဲ့ ပစ္စည်းဟာ လူတွေမကြိုက်လို့၊ လက်မခံကြလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူကြိုက်အောင်၊ လက်ခံလာအောင် အတင်းအကြပ်ရောင်းမှ၊ ဈေးလျှော့ရောင်းမှ စသဖြင့် ရောင်းတဲ့ဗျူဟာတွေသုံးဖို့ လိုအပ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အီဒီယံဆိုတဲ့ သွယ်ဝိုက်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ လူတွေလက်ခံလာအောင်လုပ်ဖို့ လူတွေရဲ့  ထောက်ခံမှုရရှိဖို့ ခက်ခဲတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းတော့ ဖိအားပေးမှ ၊ အတင်းအကြပ်လုပ်မှ ဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောမျိုး၊ လက်ခံနိုင်မယ့် အခြေအနေမျိုးကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးကို သမ္မတ Donald Trump အစိုးရကချပြတဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး အစီအစဉ်သစ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒီမိုကရက်တွေဘက်က အထက်လွှတ်တော်နဲ့ အောက်လွှတ်တော်မှာ လက်မခံနိုင်ဘဲ ရှိနေတဲ့အတွက် Deutsche Welle သတင်းစာကြီးက Why Donald Trump′s immigration deal isahard sell ဆိုတဲ့ ခေါင်းကြီးနဲ့Donald Trump ရဲ့  လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး အစီအစဉ်ကို ဘာကြောင့် လက်မခံကြသလဲ၊ လက်ခံလာအောင်လုပ်ဖို့ကခက်တဲ့အကြောင်းကိုရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
The tax increase on electricity will beahard sell to the voters.
လျှပ်စစ်ဓါတ်အားအပေါ် အခွန်တိုးကောက်တာဟာ မဲဆန္ဒရှင်တို့အတွက် လက်ခံနိုင်ဖို့ ခက်ခဲမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီသတင်းပတ် တင်ပြခဲ့တဲ့ idioms အသုံးတွေက Pick up the tab, All eyes on နဲ့ A hard sell တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။